Dhaq-dhaqaaqyo hubaysan oo ka biloowday duleedka degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay. – Radio Daljir
Oktoobar 17, 2012 5:41 b 0
Buur-xakabo, Oct 17- Wararka naga soo gaaraya degmada Buur-xakabo ee gobolka Baay ayaa soo sheegaya in
ciidanka dawladda iyo kuwa ammison ay ku dhawaadeen magaalada ayna suura gal tahay dagaal si fudud u qarxa.
Qof ku sugan degmada Buurhakaba oo diiday in magaciisa la adeegsado ayaa daljir? u sheegay in xaalada
magaalada Buurhakaba ay tahay mid degan inkastoo dadku ay dhegaha u taagayaan xaaladan magaalada ay gashay.
Dadku waxay ka cabsi qabaan in haddii ciidamada baxay ee xarakada Al-Shabaab ay go?aansadaan inay dib u soo rogaal celiyaan oo ay magaalada ku dagaalamaan uu ka dhalan karo khasaaare ballaaran, dhawrkii bilood ee la soo dhaafay Alshabaab waxaa lagala wareegay degmooyin muhiima oo ku yaal koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Magaalada Buur-xakabo? oo ah magaalo wadada laamiga ku taalla waxay qiyaastii 179-km u jirtaa magaalada Muqdisho dhanka koonfur galbeed, iyadoo magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Baay u jirta 66-km.
Haddii degmadaasi laga qabsado Alshabaab waxay noqonaysaa inay isku furanto wadada muhiimkaa ee u dhaxaysa Baydhabo iyo caasimadda Muqdisho.